भर्खरै माइतिघरमा झन्डै झ*डप : ४८ घण्टा भित्र देउवालाई प्रधा*नमन्त्री बनाउनु भनेपछि सड'कभरि प्रह'री, भिडियो हेर्नुहोस (सहि कि गलत ? ) - Public 24Khabar
Home News भर्खरै माइतिघरमा झन्डै झ*डप : ४८ घण्टा भित्र देउवालाई प्रधा*नमन्त्री बनाउनु भनेपछि...
भर्खरै माइतिघरमा झन्डै झ*डप : ४८ घण्टा भित्र देउवालाई प्रधा*नमन्त्री बनाउनु भनेपछि सड’कभरि प्रह’री, भिडियो हेर्नुहोस (सहि कि गलत ? )
सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दाको देउवा पक्षमा फैसला सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जेठ ८ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १ सय ४६ सांसदले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। रिट निवेदकका ३६ कानुन
व्यवसायीले सुरुमा बहस गरेका थिए।
विपक्षीका तर्फबाट महान्यायाधिवक्तासहित ११ जना सरकारी वकिलले बहस गरे। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट २१ र
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट ५ कानुन व्यवसायीले बहस गरेका थिए।
रिट निवेदकका तर्फबाट चार वरिष्ठ अधिवक्ताले प्रत्युत्तर बहस गरेका थिए। एमिकस क्युरीका तर्फबाट नेपाल बार एसोसिएसनबाट दुई र सर्वोच्च बार एसोसिएसनबाट दुईजनाले बहस गरेका थिए। अदालतको साथी मानिएको (एमिकस क्युरी) को राय बाझिएको छ।
निर्णय उचित भएको बताएका थिए भने वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय राघवलाल वैद्य र कोमलप्रकाश घिमिरेले रिट निवेदनको माग सही भएको राय दिएका थिए।
Previous articleBina Sapkota Latest Update | बिनालाई खोज्दै जादा भेटिए थुप्रै बलिया प्रमाणहरु, भिडियो हेर्नुहोस (न्याय का लागि सेयर गराै)
Next articleसर्वो’च्चको फैस’ला लगत्तै एमाले कार्यकर्ता सडकमा उत्रिए, यसरी चर्कि’यो आन्दो’लन ! भिडियो हेर्नुहोस् (सहित कि गलत ? )